"मेरो नेतृत्वको बर्तमान सरकारले दुई बर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छ। यदि महामारिको चलेटामा नपरेको भय यतिबेला हामी बिकास र समृद्धि को बारेमा बहस गरिरहेको हुनेथियौं, स्वदेशमै फलदाइ रोजगारिको बहस गरिरहेका हुनेथियौं , कृषिमा आधुनिकरणको बहस गरिरहेका हुने थियौं।"
"भनिन्छ संकटले अवसरको पनि ढोका खोल्छ। कोरोना भाइरसले सृजना गरेको चुनौती हरुलाइ हामिले अवसरमा रुपान्तरित गर्न प्रयास गर्नु पर्दछ।"
"कोरोना महामारिले उत्पन्न हुने बिश्वब्यापी आर्थिक मन्दिले बैदेशिक रोजगारी गुम्ने जोखिममा रहेका र मुलुक भित्रै रहेका बेरिजगारि लाई समेटेर रोजगारिका कार्यक्रम लागू गर्ने नीति लिइनेछ।"
"कृषि, साना तथा मझेउला उद्योगका अतिरिक्त स्वराजगारिका नयाँ संभावना खोजी गर्न संबन्धित क्षत्रका ब्यवसायी, विशेषज्ञहरु र स्वयं युवा संग मिलेर ठोस योजना ल्याइनेछ।"
"यस महामारिले स्वास्थ्य पुर्बाधारमा लगानी गर्न सिङ्गो बिश्वलाई र हामीलाई पनि बेस्सरि घचघच्याएको छ र यसलाइ सरकारले गम्भीर ध्यान दिनेनै छ।
सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यु नमस्कार। माथी उल्लेखित बुदा तपाइँ आफैंले देशबासिका नाममा नयाँ बर्षको शुभाकामना दिदा ब्यक्त गरिएको कमिटमेन्ट हो। बि स २००७ साल देखि समृद्ध र बिकासशित मुलुकको निमित्त नेपाली जनताले हरेक राजनितिक परिबर्तनको निमित्त अग्रपंक्तिमा रहेर साथ दिदै आएको कुरा किताब या इतिहास पढेर जानेको मैले तपाईंको स्वयम भुक्त भोगिलाइ बताउँदा इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गरेको जस्तो होला। तर आम जनतामा सृजित जब नियत परिबर्तन हुन्न तब ब्यबस्था या नीति मात्र परिबर्तन भएर मात्र नहुने रैछ भन्नेकुरा चाहिँ नभुल्नुहोला।
सम्मननिय प्रधानमन्त्रीज्यु जतिखेर तत्कालिन एमाले र माओबादी केन्द्र बिच पार्टी एकता गर्ने बाचा सहित चुनाबी तालमेल घोषणा भयो नि तब बाम बिचार संग नजिक हुने मात्र नभएर कतिपय प्रजातान्त्रिक बिचारधारा संग नजिक लगाएत कयौं तथस्थ रुपमा बसेका नेपाली ले पनि स्थिर सरकारको अपेक्षा सहित बाम गठबन्धनलाइ भोट दिएको कुरा सायद नजर अन्दाज गर्नु भएको छैन होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु। २०४६ को परिबर्तन पश्चात् हरेक बर्ष जस्तो सरकार परिबर्तनले दिक्क भएका जनता एउटा स्थिर सरकारको अपेक्षा सहित तत्कालिन बाम गठबन्दनलाइ भोट दिएका हुन। यो सम्झाइरहनु पर्ने कुरा हैन सायद। किनकि तपाईंले भम्नु भाको थियो "यो मेरो नेतृत्वको सरकार पूरा कार्यकाल चल्छ र यो अवधिमा मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्छ।
तपाइकै नेतृत्वमा गठित सरकार करिब दुई बर्ष पार गर्नै लाग्दा मुलुक कुन दिशामा बढ्दै छ त्यो बुद्धिजिबिले बहस गर्लान। यो मेरो क्षमताको बिषय हैन र फेरि हाम्रो देशमा हरेक कुरामा बिज्ञता भएका बुद्धिजिबिको कमि छैन।
सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यु तर बिगतको गल्तिलाइ समीक्षा गरेर नसच्याइ बर्तमानको गाडी गुडाउदा पुगिने भबिस्यको निर्क्योल गर्न सायदै सकियला। सुशासन, समृद्धि र पारदर्शीताको कुरा गर्दै गर्दा सुन कान्ड, वाइड बडि कान्ड, ठेकेडार कान्ड, सिन्डिकेट, ललिता निवास प्रकरण जुन आफैंले सुरु गरेको कार्य आज किन प्रथामिकतामा परेन? यो आम जनचासोको बिषय रहेको छ। ७० करोड कान्ड र हालसालै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमिता प्रती तपाईंको टिप्पणीले आम जनसमुदायले तपाइँ प्रती राख्ने दृश्टिकोण झन गिर्न गएको कुरा किन नजर अन्दाज गर्दै हुनुहुछ?
स्वस्थ्य आलोचना र टिप्पणीलाई मनन गर्दै सुधार उन्मुख हुन नखोजेमा जो कोहि पतनको बाटो उन्मुख रहन्छ भन्ने आम भनाइ छ। तर तपाईंको कुनै पनि आलोचना प्रती गर्ने क्रुर कटाक्षले एउटा देशको प्रधानमन्त्रीको मर्‍यादा भित्र पर्छ जस्तो लाग्दैन।
खैर यी सब कुरा एकछिन लाई छाडौं। सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यु तपाइँको एउटा भैङ्कर पोजेटिभ पक्ष के छ भने तपाइँ हरेक संकटमा पनि भैङ्कर आसाबादी भैदिनुहुन्छ र त्यो आसा जनतामा बाढ्नुहुन्छ। हो त्यस्तै आसा आज तपाइँले नयाँ बर्षको शुभकामना सम्बोधनमा बाढ्नु भयो जुन मैले माथी वुदागत रुपमा जस्ताको तस्तै उल्लेख गरिसके। जब कोरोनाको महामारी सन्सार भर फैलियो सायद आज बिश्व अर्थतन्त्र इतिहासकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिने कुराको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। जसको प्रत्यक्ष असर रोजगार बजारमा देखिनेछ भनेर अर्थबिद हरुले भनिसकेका छन। कयौं देशका उद्योग हरुले कामदार कटौती गर्न थालेको समचार आउन थालिसकेका छन।
म अर्थसास्त्रको विद्यार्थी त हैन तर पनि मैले बुझे सम्म नेपालको अर्थतन्त्र मुलतः ३ वटा क्षत्रसंग जोडिएको छ ती हुन रेमिट्यान्स, टुरिजम र बिदेश बाट सामान ल्यायर गरिने व्यापार। स्वदेशमा उत्पादनमुखी उद्योग अत्यन्तै कम छ। गाउँको खेतियोग्य जमिनको त कुरै छडौ तराइको पनि सिचाइ, मल लगाएत कृषिजन्य सामाग्रीको हरेक बर्ष हुने अभाब अझ झन त्यहाँ माथी कृषकले आफ्नो उत्पादनको लागत नपाउने कारणले किसान हरु कृषि पेसा प्रतिनै नैरास्य छन।
रेमिट्यान्सले कति प्रभाब पार्छ त्यो अर्थसाश्त्रीहरुले विश्लेषण अर्दै होलान। तर टुरिजमले सरसर्ती हिसाब गर्दा यातायात, होटेल तथा रेस्टुणा, ट्राभले एजेन्सी, टुर गाइड लगायतमा प्रत्यक्ष असर पार्दोरहेछ। ती बाहेक अप्रत्यक्ष असर पार्ने कती छन कति। अबको केही बर्ष पर्यटन उद्योग तङ्ग्रीन निकै कठिन छ। अनि कटौती हुने वैदेशिक रोजगारिले नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो होला?
तपाईं उल्लेख गरेजस्तै हरेक संकटले अवसर बोकेर आउँछ तर त्यो अवसरलाइ सदुपयोग गर्न मुलुकमा साच्चिकै राजनेताको जरुरत पर्छ। एउटा दुरदर्शी, समन्वयकारी र अहमताबाट मुक्त नेतृत्व आजको आवस्यकता हो। यो बेला भनेको कसैलाई दोश दिनु या कसै प्रती तीखो कटाक्ष गर्नु भन्दा सबै मिलेर एउटा ठोस कार्ययोजना बनाएर अगि बढ्नुनै उपयुक्त हुन्छ। तर त्यसका निमित्त एउटा कुशल नेतृत्वको जरुरत पर्छ र निस्चयनै त्यसको नेतृत्व सरकार प्रमुख या सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले तपाईंले लिनुपर्नेछ। अनिमात्र भइन्छ राजनेता। राजनेता दुई चार जना कार्यकर्ताले भिराइदेको तक्मा बाट हुने हैन। यो त इतिहासले मुल्यांकन गर्ने कुरा हो।
सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यु माथी सुरुमा उल्लेखित बुँदा (जुन तपाइँको नयाँ बर्षको शुभकामना सम्बोधनको बखत ब्यक्त गरिएको थियो) म लगायत सकारात्मक सोच राख्ने मानिसमा फेरि एउटा भैङ्कर आशा पैदा गर्दिएको छ। अझ युवालाई नि समेट्ने कुराले त्यो आशालाइ दुई गुणा बनाइदिएको छ। अबको केही बर्ष नेपालको अर्थतन्त्र साह्रै नराम्ररी गुज्रिनेछ। कयौं वैदेशिक रोजगारिमा गएका नेपाली रोजगारी कटौटी पश्चात स्वदेश फर्कनेछन। अब राष्ट्र सामुन्ने एउटा ठूलो अवसर आउँदै छ, उनिहरुले बिदेशमा हासिल गरेका सीप र ज्ञानको सदुपयोग गर्ने। सरकरले त्यसका निमित्त छुट्टै कार्यदल, संयन्त्र या के के बनाउन पर्ने हो बनाओस। सुरुमा उनिहरुले सिकेको सिपको लगत संकलन गर्ने त्यसपछी उनिहरुलाइ एकीकृत गरि संबन्धित सिपको प्रयोग हुने गरि उद्योग कलकारखाना हरु स्थापना गर्ने। बरु त्यसको लागि सार्बजनिक निजि सहकार्यको योजना पनि अपनाउन सकिएला। त्यो बिज्ञहरु मिलेर बनाउने कार्ययोजना हो।
त्यसपछी कृषिमा आधुनिकरण, मल लगायत बीउ बिजनको सुरक्षाको ज्ञारेन्टी, सिचाइ सुबिधाको सुनिस्चित, यातायात को सुनिस्चित। मैले यहाँ यातायातको कुरा किन गरिरहेको छु भने अधिकांस पहाड तिर बस्ती एकातिर खेती एकातिर हुँदा झन असहज भैरहेको छ। यी कुरा भए पछि मात्र ती बिदेशबाट फर्केकालाइ कृषिमा आकर्षण गर्न सकिएला। नत्र सधैं कृषिप्रधन भनेर फलाक्नु बाहेक केहि हुने छैन।
अन्त्यमा तपाइँले भनेजस्तै नेपालले आगामी दिनमा स्वास्थ्य पुर्बाधारमा लगानी गर्नेछ। अनुशन्धानमा लगानी गर्नेछ। र आगामी बिपत्ती आइ पर्दा बिदेशिले औषधि र स्वास्थ्य सामाग्री बेचे हामीले उपयोग गर्न पाउने नत्र नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। गाउँ गाउँका स्वास्थ्य चौकी हरु आधुनिल उपकरण सहित स्तरौन्नती हुनेछन। हैजा लाग्दा हजारौं नेपालीले ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। शिक्षा र स्वास्थ्य आगामि दिनमा सधैं सरकारको प्रथामिकतामा पर्ने छ।
नयाँ बर्ष २०७७ सालको शुभकामना।
उपाध्यक्ष नेपाल युवा परिष